काठमाडौं, १३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नहरुको आइतबार जवाफ दिनुहुने भएको छ । आइतबार बिहान ११ः०० बजे प्रारम्भ हुने प्रतिनिधिसभा र अपराह्न १३ः०० बजे शुरु हुने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताउनुभयो...
ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश–३ मा कार्की
काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश नं ३ का अध्यक्षमा विनोद कार्की निर्वाचित भएका छन् । ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश नं ३ को शुक्रबार राति सम्पन्न मतपरिणामानुुसार २६६ मत ल्याएर कार्की विजयी भएका हुन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी गणेश भट्टराईले २५४ मत प्राप्त गरे । यस्तै उपाध्यक्ष (खुल्ला)मा गोविन्द डंगोल र घनश्याम चापागार्इं, उपाध्यक्ष (महिला)मा...
बर्डफ्लु देखियो राजधानीमा : जनताको स्वास्थ्य रक्षामा सरकार के गर्दैछ त ?
काठमाडौं, १२ जेठ । केही दिनअघि चितवनमा देखिएको बर्डफ्लु संक्रमण काठमाडौंमा पनि देखिएको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत धर्मस्थलीमा हाँस र कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको हो । सानो खोरमा पालिएका कुखुरा र हाँसमा बर्डफ्लु फेला परेको पुष्टि भएपछि शुक्रबार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले चिकित्सकसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको थियो । महाशाखाका...
मेलम्चीको पानी : "कति दशै पर्खाइसके ? के यो दशैमा आउलात ? "
काठमाडौं, १२ जेठ । दशैं अगावै उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउन अहिले मेलम्ची सुरुङमा फिनिसिङको काम भइरहेको छ । तर, काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो बर्षको दशैंमा उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने भाका तोके पनि कामले गति लिन नसकेपछि भाका सरेर यस बर्षको दशैंसम्म आइपुगेको छ । तर यस बर्षको दशैंसम्ममा पानी खुवाउने भाका पूरा हुने नहुने अझै पनि...
संसदमा नेता प्रकाशमानले भने : "सरकारले अन्तरिक्ष जाने बाटो छुटाएको हो कि ?"
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा अन्तरिक्ष जाने बाटो चाहि छुटाएको हो कि ? भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्व उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रश्न गरेका छन् । नेता सिंहले शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले सो कुरा बताए । उनले भने, सरकारको...
नेता सिटौला भन्छन : 'कांग्रेसबाट जनताले नयाँपन खोजेका छन्'
काठमाडौँ, ११ गते । विधान परिमार्जन गरेर युवामैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेमात्र कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने बताइएको छ । गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शुक्रवार यहाँ आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ः कांग्रेसको अबको गन्तव्य’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताले कांग्रेस सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प...
नेम्वाङले संसदमा भने : 'म त कोशीबाट पानीजहाज चढेर महासागर गएको सपना देख्छु'
अरुबेला जनताले साथीहरुलाई पत्याउँथे, अहिले हामीलाई पत्याए : काठमाडौं, ११ जेठ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम जनताले सोचेका र आफूहरुले बाचा गरेका कुरा नै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुवास नेम्वाङले बताए । उनले भने, अरुबेला जनताले साथीहरुलाई पत्याउँथे अहिले हामीलाई पत्याएका छन् । प्रतिनिधिसभामा जारी नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै उनले सपना...
काठमाडौं, १३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नहरुको आइतबार जवाफ दिनुहुने भएको छ । आइतबार बिहान ११ः०० बजे प्रारम्भ हुने प्रतिनिधिसभा र अपराह्न १३ः०० बजे शुरु हुने राष्ट्रियसभाको...
काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश नं ३ का अध्यक्षमा विनोद कार्की निर्वाचित भएका छन् । ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश नं ३ को शुक्रबार राति सम्पन्न मतपरिणामानुुसार २६६ मत ल्याएर कार्की विजयी भएका हुन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी गणेश भट्टराईले...
काठमाडौं, १२ जेठ । केही दिनअघि चितवनमा देखिएको बर्डफ्लु संक्रमण काठमाडौंमा पनि देखिएको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत धर्मस्थलीमा हाँस र कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको हो । सानो खोरमा पालिएका कुखुरा र हाँसमा बर्डफ्लु फेला परेको पुष्टि भएपछि...
काठमाडौं, १२ जेठ । दशैं अगावै उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउन अहिले मेलम्ची सुरुङमा फिनिसिङको काम भइरहेको छ । तर, काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो बर्षको दशैंमा उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने भाका तोके पनि कामले गति लिन नसकेपछि...
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा अन्तरिक्ष जाने बाटो चाहि छुटाएको हो कि ? भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्व उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रश्न गरेका छन् । नेता सिंहले शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको...
काठमाडौँ, ११ गते । विधान परिमार्जन गरेर युवामैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेमात्र कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने बताइएको छ । गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शुक्रवार यहाँ आयोजना गरेको ‘वर्तमान...
अरुबेला जनताले साथीहरुलाई पत्याउँथे, अहिले हामीलाई पत्याए : काठमाडौं, ११ जेठ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम जनताले सोचेका र आफूहरुले बाचा गरेका कुरा नै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुवास नेम्वाङले बताए । उनले भने, अरुबेला जनताले साथीहरुलाई...
नीति, कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट बैठकमा संशोधनको...
नेविसंघले खवरदारी जुलुस गर्दै : नाराका विषय यस्ता छन्
काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले राजधानीमा खवरदारी जुलुस निकाल्ने भएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिको संयोजन र नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौं जिल्ला समितिको आयोजनामा शुक्रबार दिउँसो १२ः३० बजे विश्वभाषा कलेज प्रदर्शनी मार्गबाट...
सांसदले उठाएका प्रश्नमाथि सम्भवतः आजै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने
नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफल काठमाडौ, ११ जेठ । संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको छ । गत बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल आज सकिने र आजै सांसदले उठाएका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलका...